လူနာများ အမေးများတဲ့ ဆီးချိုဆေး Metformin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများ - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » လူနာများ အမေးများတဲ့ ဆီးချိုဆေး Metformin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများ
လူနာများ အမေးများတဲ့ ဆီးချိုဆေး Metformin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများ
ဆီးချိုရောဂါဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ တဖြည်းဖြည်း အဖြစ်များလာခဲ့ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကတော့ မျက်စိကွယ်တာ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာ၊ လေဖြတ်တာ စတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကို တဖြည်းဖြည်း ချိန်းခြောက်လာနေပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါ လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဆီးချိုဆေး Metformin ဟာလည်း ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြတာကိုလည်း စာဖတ်သူတို့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါဆို Metformin နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူနာတွေ ဆီက အမေးများတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင်….
၁။ Metformin ဆိုတာဘာလဲ?
– Metformin ဆိုတာ ဆီးချို ရောဂါ အမျိုးအစား ၂ အတွက် သုံးတဲ့ ဆီးချို ဆေး တစ်မျိုးပါ။ ဆီးချိုရောဂါ ကို အကြမ်းအားဖြင့် အမျိုးအစား ၁ နဲ့ ၂ ဆိုပီး ၂ မျိုး ခွဲထားပါတယ်။ အမျိုး အစား ၁ ဆီးချိုဟာ မုန့်ချို အိတ်လို့ခေါ်တဲ့ pancreas ကနေ insulin လုံးဝ မထုတ်နိုင်တဲ့ ဆီးချို အမျိုးအစား ဖြစ်ပီး ဒီလို ဆီးချို ရောဂါမှာ insulin သာ အဓိက ထိုးပေးရပါ တယ်။
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချို ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မုန့်ချို အိတ်ကနေ insulin ထုတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ အဲ့ဒီ insulin တွေဟာ ဆဲလ်တွေထဲ ဝင်လို့မရ (insulin resistance) ဖြစ်နေတာပါ။ Metformin ဟာ insulin sensitizer ဖြစ်ပီး တစ်နည်းပြောရရင် insulin တွေကို ဆဲလ်တွေ ထဲ မြန်မြန် ဝင်လို့ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ ဆေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Metformin သောက်ထားရင် အစားအသောက် မရှောင်ပဲ ကြိုက်တာစားလို့ ရသလား?
– လုံးဝ မရပါဘူး။ Metformin သောက်ထားပေမဲ့ အစားအသောက် ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ အလွန်ချို တဲ့ အစားအစာတွေ ဥပမာ ရေခဲမုန့်၊ သရက်သီး၊ ကိတ်မုန့်၊ သကြားလုံး စတာတွေ လုံးဝ မစားရပါ။
ကဆီဓာတ်ပါတဲ့ ဆန်၊ဂျုံ ပြောင်း ဥပမာ ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဆံ၊ အာလူး၊ ပေါင်မုန့် စတာတွေကို သာမာန်ထက် လျော့စားရပါမယ်။ အသား၊ ငါး အမျိုးမျိုးနဲ့ အရွက်အမျိုးမျိုးကတော့ ကြိုက်သလောက် စားလို့ရပါတယ်။
၃။ Metformin သောက်ရင် ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ?
– အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင် metformin သောက်ရင် အစားအသောက် အနည်းငယ် ပျက်တတ်ပါတယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ အော့အန်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ ဝမ်းလျောတာတွေလည်း အခန့် မသင့်ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါး အနေနဲ့ metformin သောက်တဲ့ လူနာ ၃၀၀၀၀ မှာ ၁ ယောက်လောက်က lactic acidosis လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်မျိုး လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ lactic acidosis ဖြစ်လာရင်တော့ တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းကိုက်လာတာ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်လာတာ စတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သင့်ပါတယ်။
၄။ Metformin ကို အစာ မစားခင်သောက်ရမှာလား? စားပြီးမှသောက်ရမှာလား?
– မစားခင်ကော စားပြီးကော သောက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ metformin ဟာ အစားအသောက်ပျက်တတ်လို့ စားပြီးမှသောက်တာက လူနာတွေ အတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
၅။ Metformin ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ သောက်ရမှာလဲ?
– ဒါကတော့ လူနာပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ တချို့ လူနာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ဆီးချို ရောဂါကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပီး နောက်ဆုံး ဆေးမသောက်ရတဲ့ထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ သမားတော်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် အတိုင်း လိုက်နာ သင့်ပြီး မိမိသဘောနဲ့ ဆေးမဖြတ်သင့်ပါဘူး။
၆။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိရင် Merformin မသောက်ရဘူးဆို တာ ဟုတ်သလား?
– အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောက်ကပ် ရောဂါ အဆင့် တွက်ချက်ပီး ကျောက်ကပ်အနေအထား ကောင်းသေးရင်တော့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း သောက်လို့ရပါတယ်။
၇။ ကိုယ်ဝန်ရှိရင်ကော metformin သောက်လို့ ရသလား?
– ယခု လက်ရှိ လေ့လာစမ်းစစ် ချက်တွေ အရတော့ metformin ဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သန္ဓေသားကို လည်း ထိခိုက်မှု မရှိ နိုင်ပါဘူး တဲ့။
၈။ Metformin သောက်တာ ဆေးတိုး မတိုး ဘယ်လိုသိမလဲ?
– အဓိက ကတော့ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် မှတ်တမ်းလေး ထားပေးထားရင် ဆေး တိုးမတိုး သိနိုင်တဲ့ အပြင် ဆေးကုသရာမှာ လည်းများစွာ အကျိုးရှိစေမှာပါ။ မနက်စာ မစားခင်၊ နေ့လည်စာ စားပြီး ၂ နာရီ၊ ညစာစားပြီး ၂ နာရီ အချိန်တွေမှာ သွေးချို စစ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ အဖြေတွေကို မှတ်တမ်းလေးနဲ့ မှတ်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
၉။ Metformin သောက်ပြီး သွေးချို တအား ကျသွားတတ်လား?
– မကျတတ်ပါဘူး။ Metformin ဟာ insulin တွေကို ဆဲလ်ထဲ ဝင်အောင်သာ လုပ်ပေးပြီး insulin ပိုထွက်လာတာမျိုး မရှိတဲ့ အတွက် သွေး ချို အဂမ်းကျဖို့ အလွန်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ပင်ပင် ပန်းပန်း လုပ်တာ၊ အစာလုံးဝ မစားတာမျိုးတွေ ရှိရင်တော့ ဆီးချို ပြုတ်ကျနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြ ထားတာတွေကတော့ metformin နဲ့ ပတ်သတ်ပီး အမေးများတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေဖြစ်ပါ တယ်။ အားလုံး လည်း ဗဟုသုတရကြပြီး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ။
Credit to မောင်ခမ်း (ဆေး ၁)
ဆီးခြိုရောဂါဟာ ကမ်ဘာတဝှမျး၌ တဖွညျးဖွညျး အဖွဈမြားလာခဲ့ပါတယျ။ ဆီးခြိုရောဂါရဲ့ နောကျဆကျတှဲပွဿနာကတော့ မကျြစိကှယျတာ၊ ကြောကျကပျပကျြစီးတာ၊ လဖွေတျတာ စတဲ့ ဆိုးကြိုးတှဟောလညျး ကြှနျတျောတို့ လူသားတှကေို တဖွညျးဖွညျး ခြိနျးခွောကျလာနပေါတယျ။
ဆီးခြိုရောဂါ လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ ဆီးခြိုဆေး Metformin ဟာလညျး ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ တှငျတှငျ ကယျြကယျြ အသုံးပွုနကွေတာကိုလညျး စာဖတျသူတို့ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ဒါဆို Metformin နဲ့ ပတျသတျပွီး လူနာတှေ ဆီက အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးလေးတှကေို ကွညျ့ကွရအောငျ….
– Metformin ဆိုတာ ဆီးခြို ရောဂါ အမြိုးအစား ၂ အတှကျ သုံးတဲ့ ဆီးခြို ဆေး တဈမြိုးပါ။ ဆီးခြိုရောဂါ ကို အကွမျးအားဖွငျ့ အမြိုးအစား ၁ နဲ့ ၂ ဆိုပီး ၂ မြိုး ခှဲထားပါတယျ။ အမြိုး အစား ၁ ဆီးခြိုဟာ မုနျ့ခြို အိတျလို့ချေါတဲ့ pancreas ကနေ insulin လုံးဝ မထုတျနိုငျတဲ့ ဆီးခြို အမြိုးအစား ဖွဈပီး ဒီလို ဆီးခြို ရောဂါမှာ insulin သာ အဓိက ထိုးပေးရပါ တယျ။
အမြိုးအစား ၂ ဆီးခြို ကတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မုနျ့ခြို အိတျကနေ insulin ထုတျပေးနိုငျပမေဲ့ အဲ့ဒီ insulin တှဟော ဆဲလျတှထေဲ ဝငျလို့မရ (insulin resistance) ဖွဈနတောပါ။ Metformin ဟာ insulin sensitizer ဖွဈပီး တဈနညျးပွောရရငျ insulin တှကေို ဆဲလျတှေ ထဲ မွနျမွနျ ဝငျလို့ရအောငျ ကူညီပေးတဲ့ ဆေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂။ Metformin သောကျထားရငျ အစားအသောကျ မရှောငျပဲ ကွိုကျတာစားလို့ ရသလား?
– လုံးဝ မရပါဘူး။ Metformin သောကျထားပမေဲ့ အစားအသောကျ ဆငျခွငျရပါမယျ။ အလှနျခြို တဲ့ အစားအစာတှေ ဥပမာ ရခေဲမုနျ့၊ သရကျသီး၊ ကိတျမုနျ့၊ သကွားလုံး စတာတှေ လုံးဝ မစားရပါ။
ကဆီဓာတျပါတဲ့ ဆနျ၊ဂြုံ ပွောငျး ဥပမာ ထမငျး၊ ခေါကျဆှဲ၊ ကွာဆံ၊ အာလူး၊ ပေါငျမုနျ့ စတာတှကေို သာမာနျထကျ လြော့စားရပါမယျ။ အသား၊ ငါး အမြိုးမြိုးနဲ့ အရှကျအမြိုးမြိုးကတော့ ကွိုကျသလောကျ စားလို့ရပါတယျ။
၃။ Metformin သောကျရငျ ဘာဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈနိုငျသလဲ?
– အကွမျးအားဖွငျ့ပွောရရငျ metformin သောကျရငျ အစားအသောကျ အနညျးငယျ ပကျြတတျပါတယျ။ ခေါငျးမူးတာ၊ အော့အနျတာ၊ ဗိုကျအောငျ့တာ၊ ဝမျးလြောတာတှလေညျး အခနျ့ မသငျ့ရငျ ဖွဈတတျပါတယျ။
ရှားရှားပါးပါး အနနေဲ့ metformin သောကျတဲ့ လူနာ ၃၀၀၀၀ မှာ ၁ ယောကျလောကျက lactic acidosis လို့ချေါတဲ့ ဆိုးကြိုးတဈမြိုး လညျး ဖွဈတတျပါတယျတဲ့။ lactic acidosis ဖွဈလာရငျတော့ တဈကိုယျလုံး ညောငျးကိုကျလာတာ၊ မောပနျးနှမျးနယျလာတာ စတာတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ အဲလို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈလာရငျတော့ သကျဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြ ဆရာဝနျတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျ သငျ့ပါတယျ။
၄။ Metformin ကို အစာ မစားခငျသောကျရမှာလား? စားပွီးမှသောကျရမှာလား?
– မစားခငျကော စားပွီးကော သောကျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ metformin ဟာ အစားအသောကျပကျြတတျလို့ စားပွီးမှသောကျတာက လူနာတှေ အတှကျ ပိုပွီး အဆငျပွစေပေါတယျ။
၅။ Metformin ကို ဘယျလောကျကွာကွာ သောကျရမှာလဲ?
– ဒါကတော့ လူနာပျေါမှာပဲမူတညျပါတယျ။ တခြို့ လူနာတှဟော တဖွညျးဖွညျး ဆီးခြို ရောဂါကို ထိနျးခြုပျလာနိုငျပီး နောကျဆုံး ဆေးမသောကျရတဲ့ထိ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ သကျဆိုငျရာ သမားတျောရဲ့ လမျးညှနျခကျြ အတိုငျး လိုကျနာ သငျ့ပွီး မိမိသဘောနဲ့ ဆေးမဖွတျသငျ့ပါဘူး။
၆။ ကြောကျကပျရောဂါ ရှိရငျ Merformin မသောကျရဘူးဆို တာ ဟုတျသလား?
– အကွမျးအားဖွငျ့တော့ ဟုတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြောကျကပျ ရောဂါ အဆငျ့ တှကျခကျြပီး ကြောကျကပျအနအေထား ကောငျးသေးရငျတော့ ဆရာဝနျ ညှနျကွားတဲ့ အတိုငျး သောကျလို့ရပါတယျ။
၇။ ကိုယျဝနျရှိရငျကော metformin သောကျလို့ ရသလား?
– ယခု လကျရှိ လလေ့ာစမျးစဈ ခကျြတှေ အရတော့ metformin ဟာ ကိုယျဝနျရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ သန်ဓသေားကို လညျး ထိခိုကျမှု မရှိ နိုငျပါဘူး တဲ့။
၈။ Metformin သောကျတာ ဆေးတိုး မတိုး ဘယျလိုသိမလဲ?
– အဓိက ကတော့ သှေးတှငျး သကွားဓာတျ မှတျတမျးလေး ထားပေးထားရငျ ဆေး တိုးမတိုး သိနိုငျတဲ့ အပွငျ ဆေးကုသရာမှာ လညျးမြားစှာ အကြိုးရှိစမှောပါ။ မနကျစာ မစားခငျ၊ နလေ့ညျစာ စားပွီး ၂ နာရီ၊ ညစာစားပွီး ၂ နာရီ အခြိနျတှမှော သှေးခြို စဈပေးရမှာ ဖွဈပွီး စဈဆေးလို့ရတဲ့ အဖွတှေကေို မှတျတမျးလေးနဲ့ မှတျပေးထားသငျ့ပါတယျ။
၉။ Metformin သောကျပွီး သှေးခြို တအား ကသြှားတတျလား?
– မကတြတျပါဘူး။ Metformin ဟာ insulin တှကေို ဆဲလျထဲ ဝငျအောငျသာ လုပျပေးပွီး insulin ပိုထှကျလာတာမြိုး မရှိတဲ့ အတှကျ သှေး ခြို အဂမျးကဖြို့ အလှနျရှားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အလုပျပငျပငျ ပနျးပနျး လုပျတာ၊ အစာလုံးဝ မစားတာမြိုးတှေ ရှိရငျတော့ ဆီးခြို ပွုတျကနြိုငျပါတယျ။
အထကျမှာ ဖျောပွ ထားတာတှကေတော့ metformin နဲ့ ပတျသတျပီး အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးလေးတှဖွေဈပါ တယျ။ အားလုံး လညျး ဗဟုသုတရကွပွီး ကနျြးမာ ပြျောရှငျ နိုငျပါစေ။
Credit to မောငျခမျး (ဆေး ၁)